Dhaawaca lagu daweeyay Cisbitalka iyo dadka carara ah kadib dagaalada gobolka Galgaduud - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
“Gaaritaanka dadka ka cararay dagaalada iyo gaarsiinta caawinaada waa muhim, laakin waxay noqotay mid ku sii cuslaanayso gobolka Galgaduud,” oronayo Tom Quinns isuduwaha mashaaricda MSF ee soomaaliya.
Nairobi – Dagaal ka cusboonaaday gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kaas oo u geeystay dhaawac fara badan kuna qasabtay kumanaan inay cararaan.Kadib markay dagaal culus oo dhaxmaray laba kooxood maalintii axada lasoo dhaafay, dakhaatiir katirsan hay’adda samafal ee MSF ayaa ku daaweyeen cisbitalka Istarliin ee magaalada Guri Ceel 46 lix qof oo dhaawac ah. Tan waxay gaarsiinaysa dhaawaca la daaweeyay ila iyo muddada dagaaladan bilowday oo laba todobaab laga joogo 86 qof.
Inta u dhaxayso 45,000 iyo 60,000 ayaa lagusoo waramayaa inay ka barakaceen magaalda Guri Ceel iyo caasimada gobolka Dhusa Mareeb oo u qaxay tuuloyinka ayagoo ka go’doomeen mucaawanada aad oogu baahnaayeen.
“Xaalada oo sii xumaanayso maalin waliba gobolka Galgaduud,” waxaa sharxaayaa Tom Quinns isuduwaha mashaaricda MSF ee soomaaliya. “Guri Ceel waxay noqotay meel maran sidaas lamid na Dhuusa Mareeb. Waxaan oogu yaraan gaarsiinay ila iyo 200 oo caruur ah aragtidooda, taas oo aad u walbahaar badan markii loo fiiriyo baahida badan. Tobaneeya kun oo haween, caruur iyo waayeel oo cararay ayaa soo food saartay dhibaato dhinaca helitaanka cunnada, biyaha iyo daryeel caafimaad.”
Fajacitaan badan ayaa ka muuqdaa akhbaarta. Shaqaalaha MSF ayaa loo sheegay in qoysaska maalintii harsadaan geeda hoostooda, ayna seexdaan habeenkii meela banana. Culayska dagaalada socdaan ay kuhaayaan meelaha cunnada kuyareed waxay keeni kartaa xaalad aad u xun khaasatan markay u dhax roorsato biyo iyo daryeel caafimaad la’aan. Hada kahor waqtiyada xasiloonida jirtay, MSF waxay gargaar ufidhisay cisbitalka Istarlin oo dhaaweeyo 80 ila 100 ciyaal oo aad u macaluulsan bil kasta.
“Gaaritaanka dadka ka cararay dagaalada iyo gaarsiinta caawinaada waa muhim, laakin waxay noqotay mid ku sii cuslaanayso gobolka Galgaduud,” oronayo Quinn.”Gaadidka dhinaca hawada iyo wadada ayaa aad loo yareeyay sababa la xariiraan khatarta jirta, taas oo oo u keentay geysmada qalabka dawada iyo caawinaatka oo sii adkaatay.”
Wadahal maalma socday kadib, MSF waxay bilaabaysaa biyo gaarsiin dhamaan dadka ka barakacay Guri Ceel iyo Dhuusa Mareeb. Sidoo kale, caawitaan dhinaca daryeel caafimaadeed dadka u cararay duurka ayaa adkaanaysaa kadib markii loo fiiriyo isbedelka dagaalada joogtada ah.
Ka gudbitaanka caqabada gaarsiinta gaargaarka binaadameed ayaa horsed u ah MSF gobolka Galgaduud, iyo gobolada dhan ee soomaaliya ee gargaar u bahaan. In kastoo bulshada caalamka oo mudnaan siinayso burcad badeeda badweynta soomaaliya, malaayiin soomaali oo tabaalaysan ayaa laga jeegsanayaa.
MSF waxay ka fulisaa mashaariic caafimaadeed sagaal gobol oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliaya kuyaala. Hay’adda waxay ka shaqaysay Guri Ceel (Cisbitalka Istarliin) ee gobolka Galgaduud laga bilaabo 2006. Sanadkii 2008, iskucelcelis 3700 qof bil walba ayaa daaween iyo la tashi caafimaadeed loo fuliyay qaybta bukaan socodka iyo 330 bukaan jiif bil walba. Sidoo kale MSF waxay ku leedahay laba goobo caafimaadeed: Hal kuyaalo Dhuusa Mareeb Caasimada Galgaduud iyo mid kale kuyaalo xiindheer kaas oo la furay January 2008. Sanadka lasoo dhaafay, iskucecelis 1600 la tashi caafimaadeed ayaa lagu sameeyay labada goobood bil walba.
Tags: dagaal, dhaawac, Galgaduud, South Central Somalia